ယောက်ျားများအတွက် အဝတ်အစား – Gentleman Magazine
ဗိုက်ရွဲနေတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှု မရှိတတ်ပါဘူး။ အဲလို လူတွေဟာ အဝတ်အစားပွပွကြီးတွေကို ဝတ်ပြီး သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို ကာကွယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မသိတာက အဲလို အဝတ်ပွပွကြီးတွေ ဝတ်တာဟာ သူတိူ့ဗိုက်ကို ပိုပြီး ရွဲသယောင်တောင် ဖြစ်နေစေတယ် ဆိုတာပါ။ အရမ်းကျပ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ရင်လဲ ပိုပြီးပိန်ပုံ ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အင်္ကျီပုံစံက ဘယ်လိုလဲ?? မကျပ်မပွ အနေတော်ဝတ်တာက သော့ချက်ပါ။ သင်နဲ့တန်ပြီး ဗိုက်နေရာမှာ အရမ်းမကျပ်တဲ့ အင်္ကျီလိုမျိုးပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝတ်ဖို့ဆိုရင် မကျပ်မပွ အနေတော် ဘောင်းဘီတွေဝတ်ရမှာပါ။ အနေတောင်ဘောင်းဘီရွေးနည်းကတော့ သင့်တင်ပါးမှာ တင်နေမယ့် ဘောင်းဘီမျိုးကို ရွေးပါ။ ဗိုက်မှာ တင်နေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရှေ့ပိုင်းမှာ အခေါက်တွေပါပြီး တင်းကျပ်နေမယ့် ဟာမျိုးလဲ မရွေးပါနဲ့။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင့်ရဲ့ ဗိုက်ဟာ ဘောင်းဘီအဝိုင်းထက် ပိုပြီး ကြီးမနေပါစေနဲ့။ လိုအပ်ရင် ဘောင်းဘီ ဆိုဒ်ပိုကြီးတာ ရှာပြီး ခါးပါတ်နဲ့ အနေတော်ဖြစ်အောင် ချိန်ဝတ်ပါ။
အရမ်းကျပ်လွန်း၊ ပွလွန်းတဲ့ ဘောင်းဘီတွေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုပြီး ဝပုံ ပေါက်စေပါတယ်။ သင်နဲ့တော်ပြီး ဗိုက်နေရာမှာ အရမ်းမကျပ်နိုင်တဲ့ ဘောင်းဘီကို အချိန်ပေးပြီး ရှာပါ။ သင့်ကို ပိုပြီး ပိန်ပုံပေါက်စေဖို့ အကြံလေးတွေ ပေးလိုက်ပါမယ်။
– နည်းနည်းလေး ချောင်တဲ့ Denim သားဘောင်းဘီကို ရှာပါ။ Skinny ဘောင်းဘီတွေကို ရှောင်ပါ။
-ပါးပြီး အမှောင်ဘက် အရောင်ရောက်တဲ့ အင်္ကျီတွေကို သုံးပြီး သင့်ဗိုက်ကို ကာနိုင်ပါတယ်။
-လိုအပ်ရင် သင့် ဝမ်းဗိုက်အောက်နားမှာ ခါးပါတ် ပါတ်ထားပါ။ သင့်ဗိုက်က အရမ်းကြီးရွှဲနေတာမဟုတ်ရင် ဒီ Trick လေးက သင့်ကို ပိန်ပုံ ပေါက်စေပါတယ်။
– အမှောင်ရောင်ဘက်ရောက်တဲ့ အဝတ်ပါးတွေကိုသာ ဝတ်ပါ။ အင်္ကျီ ဘောင်းဘီကို အမည်းရောင်ပြေးတွေ ဝတ်ပြီး Jacket ကိုတော့ တခြားအရောင် ဝတ်ပါ။
– ဘေးတိုက် လိုင်းတွေ ပါတဲ့ အင်္ကျီဟာ သင့်ကို ပိုပြီး ဝပုံပေါက်စေပါတယ်။ ဒေါင်လိုက်အစင်းပါတဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်နိုင်ပါတယ်။ လိုင်းတွေ အရမ်းထူမနေဖို့ပဲ ဂရုစိုက်ပါ။
– ပုံ အကြီးကြီးပါတဲ့ တီရှပ်တွေက ပိုပြီး ဝပုံ ပေါက်စေလို့ ရှောင်ရပါမယ်။
-အရမ်းထူတဲ့ ဆွယ်တာ မဝတ်ပါနဲ့။ အမှောင်ရောင် ဆွယ်တာတွေကိုပဲ ဝတ်ပါ။
– တီရှပ်၊ ရှပ်လက်ရှည်တွေကို သင့်ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားပြောင်းလဲသွားသလို ထင်မှတ်ရအောင် ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဗိုကျရှဲနတေဲ့ ယောကျြားတဈယောကျဟာ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှု မရှိတတျပါဘူး။ အဲလို လူတှဟော အဝတျအစားပှပှကွီးတှကေို ဝတျပွီး သူ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံစံကို ကာကှယျတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့မသိတာက အဲလို အဝတျပှပှကွီးတှေ ဝတျတာဟာ သူတိူ့ဗိုကျကို ပိုပွီး ရှဲသယောငျတောငျ ဖွဈနစေတေယျ ဆိုတာပါ။ အရမျးကပျြတဲ့ အဝတျအစားတှေ ဝတျရငျလဲ ပိုပွီးပိနျပုံ ပေါကျလာမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒါဆိုရငျ ယောကျြားတဈယောကျအတှကျ အဆငျပွစေမေယျ့ အကငြ်္ီပုံစံက ဘယျလိုလဲ?? မကပျြမပှ အနတေျောဝတျတာက သော့ခကျြပါ။ သငျနဲ့တနျပွီး ဗိုကျနရောမှာ အရမျးမကပျြတဲ့ အကငြ်္ီလိုမြိုးပါ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတှမှော ဝတျဖို့ဆိုရငျ မကပျြမပှ အနတေျော ဘောငျးဘီတှဝေတျရမှာပါ။ အနတေောငျဘောငျးဘီရှေးနညျးကတော့ သငျ့တငျပါးမှာ တငျနမေယျ့ ဘောငျးဘီမြိုးကို ရှေးပါ။ ဗိုကျမှာ တငျနရေမှာ မဟုတျပါဘူး။ အရှပေို့ငျးမှာ အခေါကျတှပေါပွီး တငျးကပျြနမေယျ့ ဟာမြိုးလဲ မရှေးပါနဲ့။
အရေးကွီးဆုံးကတော့ သငျ့ရဲ့ ဗိုကျဟာ ဘောငျးဘီအဝိုငျးထကျ ပိုပွီး ကွီးမနပေါစနေဲ့။ လိုအပျရငျ ဘောငျးဘီ ဆိုဒျပိုကွီးတာ ရှာပွီး ခါးပါတျနဲ့ အနတေျောဖွဈအောငျ ခြိနျဝတျပါ။
အရမျးကပျြလှနျး၊ ပှလှနျးတဲ့ ဘောငျးဘီတှဟော သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို ပိုပွီး ဝပုံ ပေါကျစပေါတယျ။ သငျနဲ့တျောပွီး ဗိုကျနရောမှာ အရမျးမကပျြနိုငျတဲ့ ဘောငျးဘီကို အခြိနျပေးပွီး ရှာပါ။ သငျ့ကို ပိုပွီး ပိနျပုံပေါကျစဖေို့ အကွံလေးတှေ ပေးလိုကျပါမယျ။
– နညျးနညျးလေး ခြောငျတဲ့ Denim သားဘောငျးဘီကို ရှာပါ။ Skinny ဘောငျးဘီတှကေို ရှောငျပါ။
-ပါးပွီး အမှောငျဘကျ အရောငျရောကျတဲ့ အကငြ်္ီတှကေို သုံးပွီး သငျ့ဗိုကျကို ကာနိုငျပါတယျ။
-လိုအပျရငျ သငျ့ ဝမျးဗိုကျအောကျနားမှာ ခါးပါတျ ပါတျထားပါ။ သငျ့ဗိုကျက အရမျးကွီးရှဲနတောမဟုတျရငျ ဒီ Trick လေးက သငျ့ကို ပိနျပုံ ပေါကျစပေါတယျ။
– အမှောငျရောငျဘကျရောကျတဲ့ အဝတျပါးတှကေိုသာ ဝတျပါ။ အကငြ်္ီ ဘောငျးဘီကို အမညျးရောငျပွေးတှေ ဝတျပွီး Jacket ကိုတော့ တခွားအရောငျ ဝတျပါ။
– ဘေးတိုကျ လိုငျးတှေ ပါတဲ့ အကငြ်္ီဟာ သငျ့ကို ပိုပွီး ဝပုံပေါကျစပေါတယျ။ ဒေါငျလိုကျအစငျးပါတဲ့ အဝတျအစားတှေ ဝတျနိုငျပါတယျ။ လိုငျးတှေ အရမျးထူမနဖေို့ပဲ ဂရုစိုကျပါ။
– ပုံ အကွီးကွီးပါတဲ့ တီရှပျတှကေ ပိုပွီး ဝပုံ ပေါကျစလေို့ ရှောငျရပါမယျ။
-အရမျးထူတဲ့ ဆှယျတာ မဝတျပါနဲ့။ အမှောငျရောငျ ဆှယျတာတှကေိုပဲ ဝတျပါ။
– တီရှပျ၊ ရှပျလကျရှညျတှကေို သငျ့ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားပွောငျးလဲသှားသလို ထငျမှတျရအောငျ ဝတျဆငျနိုငျပါတယျ။
Previous: ယောက်ျားတွေ ဘာကြောင့် အသည်းကွဲကြာရှည်ကြတာလဲ??
Next: လိင်မှတဆင့်ကူးဆက်နိုင်တဲ့ ရောဂါများ